integrated - Synonyms of integrated | Antonyms of integrated | Definition of integrated | Example of integrated | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for integrated
Top 30 analogous words or synonyms for integrated
မက္ကထရောနစ်ပညာရပ် • Computer aided and integrated manufacturing systems
ဝန်ဆောင်မှုများစုစည်းထားသော ဒီဂျစ်တယ်ကွန်ယက် Integrated Services Digital Network (ISDN) သည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဒယ်ဂျစ်တယ် ထုတ်လွှင့်မှု၏ ဆက်သွယ်ရေးစံနှုန်းဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် သည် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်များအား လေ့လာသည့်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းနယ်ပယ်သည် လျှပ်စစ်တယ်လီဂရပ်၊ တယ်လီဖုန်း၊ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး၊ အသံလွှင့်ခြင်းစသည်တို့ကို နေ့စဉ်သုံးလာပြီး ၁၉ ရာစုနှစ်ထက်ဝက်နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးတွင်ကျယ်လာခဲ့သည်။ ထရန်စတာ၊ integrated circuit များကို တီထွင်ပြီးနောက်ပိုင်း အိမ်သုံး အီလက်ထရွန်းပစ္စည်းများ အသုံးချရာတွင် အရေးပါလာခဲ့သည်။
လက်ပံတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာ ၆၆။ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် Environmental Myanmar Cooperative Company Limited ( EMC) က Base Line and Monitoring Survey on Flora and Fauna of Letpadaung Copper Project Mine Area ကိုလည်း စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ Re-assessment of EIA & SIA တို့ကို ကုမ္ပဏီ ၃ ခုဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီး Integrated Management System (IMS)၊ Integrated Management Procedures ( IMPs)၊ Environmental Control Procedures (ECPs)၊ Safety Procedures၊ Environment Aspect Register နှင့် Standard Operating Procedures (SOPs) စသော လုပ်ငန်းများကို ပြဋ္ဌာန်းပြီး အသေးစိတ် စီမံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်။
အော်ပရေရှင်နယ် အင်ပလီဖိုင်ယာ အစပိုင်းတွင် အော်ပရေရှင်နယ် အင်ပလီဖိုင်ယာများ(op-amp)ကို ပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်း၊ အင်တီဂရေးရှင်း၊ ဒစ်ဖရန်ရှေးရှင်း အစရှိသော သင်္ချာဆိုင်ရာ တွက်ချက်ခြင်းများအတွက် သုံးရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သော်ကြောင့် အော်ပရေရှင်နယ် ဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်း အော်ပရေရှင်နယ် အင်ပလီဖိုင်ယာများကို Vacuum Tube များနှင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အားပြင်းသောဗို့ဒ်အားများနှင့် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် op-amp များသည် linear integrated circuits (ICs) ဖြစ်ကြပြီး ဒီစီဗိုဒ်အားတွင်အလုပ်လုပ်လာကြပြီး ပိုမိုသင့်လျော်လာကာ ဈေးချိုလာကြသည်။
အပိုလို ၁၁ The MESA failed to provideastable work platform and was in shadow, slowing work somewhat. As they worked, the moonwalkers kicked up gray dust which soiled the outer part of their suits, the integrated thermal meteoroid garment.
အိုင်စီပတ်လမ်း ယခု‌ခေတ်သည် မိုက်ခရို အီလက်ထရွန်းနစ်‌ခေတ် ဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုအီလက် ထရွန်းနစ် ဆိုသည်မှာ မိုနိုလစ်သစ် အင်တီဂရိတ်တက် ဆာကစ်များ (monolithic integrated circuits)၊ အလွှာထူ ဟိုက်ဗရစ် ဆာကစ်များ (thick-film hybrid circuits)နှင့် အလွှာပါး ဟိုက်ဗရစ် ဆာကစ်မျာ;(thin-film hybrid circuits) များ၏ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ တည်‌ဆောက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်‌သော ဘာသာရပ်ကို ‌ခေါ်သည်။
စီပီယူ အချိန်ကာလကြာသည်နှင့်အမျှ စီပီယူများ၏ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ဒီဇိုင်း မှာ ကွဲပြားသွားသည်။ သို့သော် အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ အားလုံးနီးပါးမှာ ပြောင်းလဲမှု မရှိပေ။ စီပီယူတွင် ALU (arithmetic logic unit) နှင့် Control Unit တို့ အဓိကပါဝင်သည်။ ခေတ်သစ် စီပီယူအများစုသည် မိုက်ခရို ပရော်ဆက်ဆာများ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင် IC (integrated circuit) Chip တစ်ခုသာ ပါဝင်သည်။
ဆိုနီ ဆိုနီမှ ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများစွာကို ဗိုင်အို (VAIO) ဟူသည့် အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့်တွင် ဆိုနီမှ ကွန်ပျူတာ ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဂျပန်ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ကွန်ပျူတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ရပ်နားခဲ့ကာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် မှ ဗိုင်အို တံဆိပ် (VAIO - Video Audio Integrated Operation)ကို အသုံးပြုကာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဆိုနီ၏ လက်ပတော့ကွန်ပျူတာအချို့၏ ဘက်ထရီများ ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာများ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့ရမှုက ထိုစဉ်က အများဆုံးပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမှုအဖြစ် သမိုင်းတွင်ခဲ့သည်။
လက်ပံတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာ (၂၈)လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းလက်စွဲပါ လမ်းညွှန်ချက်နှင့် ကောင်းမွန်သော နိုင်ငံတကာ အလေ့အကျင့် စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ စီမံကိန်း စတင်စဉ်ကပင် မရှိခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေသော စံပယ်တောင်နှင့် ကြေးစင်တောင် စီမံကိန်း၏ ပေါင်းစပ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Integrated Management Systems) ထက် ကောင်းမွန်သော စနစ်နှင့်အတူ ပိုမိုထိရောက်သော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အစီအမံများကို လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းတွင် လိုက်နာ ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း ဒီဇိုင်း လက်စွဲစာအုပ်ကိုလည်း ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြု အပ်ပါသည်။